The Stray ( 2017 ) - Myanmar Asian TV
သီးခြားခွေးလေးတစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ ခွေးလေးပလူတိုနဲ့ မစ်ခ်ျဒေးဗစ် တို့မိသားစုရဲ့ ဒရမ်မာ မိသားစုဆန်ဆန် ဖြစ်ရပ်မှန်ဇတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါဗျ
ဒေးဗစ်၏်သားဖြစ်သူ ခရစ်ရှန်ရဲ့ မူလတန်းကျောင်းကစားကွင်းမှာ အနိုင်ကျင့်ခံရချိန်မှာဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့ခွေးလေးတစ်ကောင် ရောက်လာခဲ့ ပြီး သူ့ကိုကယ်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်
သမီးငယ်လေး ကင်ဆေးဘက်ဂ် ဆော့ကစားရင်း
ဒေးဗစ်နဲ့အတူ အချိန်တွေကုန်ဆုံးပေးတယ် မိသားစုအပေါ်စောင့်ရှောက်ပေးတယ် ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာဖြစ်တဲ့ဒေးဗစ်ဟာအလုပ်ကြိုးစားသူတစ်ယောက်ဖြစ်တာမို့မိသားစုနဲ့တော့အနည်းငယ်အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး
အချိန်လုံလုံလောက်လောက်မပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး နောက်တော ဒေးဗစ်တို့ မိသားစုဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကော်လိုရာဒိုကို ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြပါတယ်
မိသားစုအပေါ်အချိန်ကုန်ဆုံးပေးချင်တာတဖြစ်လဲ အိမ်နီးချင်းတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး သူတို့သားသမီးတွေနဲ့ အတူ စခန်းချတောင်တက်ခရီးထွက်ခဲ့ကြပါတယ်
ဒုက္ခရောက်တိုင်းကူညီပေးနေတဲ့ ပလူတိုကကော ကူညီကာကွယ်ပေးနိုင်မလားတော့………???
လူသားနဲ့ ခွေးလေးတွေအကြား မေတ္တာတရားကိုလဲ သုံးသပ်နိုင်မှာဖြစ်သလို ဝမ်းနည်းဝမ်းသာ ဒရမ်မာ ဒဿန မိသားစုဆန်ဆန် ရသတွေပေးစွမ်းနိုင်ပါသော ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ….
Rating မှာလည်း IMDb5.3/10ထိရရှိထားတဲ့ကားလေးပါ …
Openload.co Myanmar895 MB Download Soliddrive.co Myanmar Download
Trailer: The Stray ( 2017 )